I-Sanzaar ichitha umbiko osuke e-Australia
UKAPUTENI weStormers, uSiya Kolisi, ngomunye wabadlali abangathinteka uma kuhoxiswa iNingizimu Afrika kwiSuper Rugby Isithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | May 13, 2020
INHLANGANO eyengamele umbhoxo wamazwe ahlanganisa iNingizimu Afrika, New Zealand, Australia ne-Argentina, eyaziwa ngeleSanzaar, ithi iyakweshwama okushiwo umbiko oqubuke e-Australia, othi kunezinhlelo zokuyikhiphela ngaphandle iNingizimu Afrika ne-Argentina kwiVodacom Super Rugby.
Kusukela ngempelasonto kunamahlebezi okucacayo nokho ukuthi avela e-Australia kuphela, akhomba ukuthi iSanzaar isezinhlelweni zokushiya ngaphandle awakuleli adlala kwiSuper Rugby, kanjalo nokuyilona lodwa e-Argentina emiqhudelwaneni ezayo.
Le mibiko ikhomba ukuthi lo mqhudelwano ungalawuleka kangcono ngokuzayo uma kushiywa ngaphandle iCell C Sharks, Vodacom Bulls, DHL Stormers ne-Emirates Airlines Lions, okungawakuleli, neqembu elilale isibili ngesizini edlule iJaguares yase-Argentina.
Nakuba lokhu kubhebhezeliswa nawukuthi kushiwo abantu abahlonishwayo embhoxweni womhlaba (abadabuka e-Australia) kodwa iSanzaar ithe ngamanga aluhlaza ukuthi kukhona izinhlelo ezinjalo.
Le nhlangano iyavuma ukuthi isimo ebhekene naso ku-2020 ngenxa yeCoronavirus, asijwayelekile futhi siyethusa kodwa eyokuthi kunezinhlelo zokuqhubeka ngaphandle kweNingizimu Afrika ne-Argentina yinganekwane.
Ekuqaleni kwesonto iSanzaar ikhiphe isitatimende ichaza amahemuhemu njengento engekho futhi eyingozi kabi kumbhoxo wonkana ngoba iyakhohlisa. Kulesi sitatimende kuvele nokuthi womane amazwe (Ningizimu Afrika, New Zealand, Australia ne-Argentina) anesivumelwano esiyoze siphele ngo-2030.
“ISanzaar ithanda ukuqondisa iphutha emibikweni esabalale umhlaba wonke ngempelasonto mayelana nekusasa lale nhlangano ikakhulukazi umqhudelwano weSuper Rugby.
“Yize sikwamukela ukuthi isimo esibhekene naso kulo nyaka ngenxa yeCovid -19, asijwayelelkile futhi sisenza sizithole sesinquma ngezinto esasingakaze sizitshele ukuthi siyoke sibhekane nazo kodwa kumqoka ukuqonda ukuthi zonke izinqumo mayelana nekusasa lomqhudelwano ziyothathwa ngokuvumelana kwethu sonke.
“Yebo zikhona izingxooxo ngekusasa lomqhudelwano kodwa zihlanganisa wonke umuntu. Sinesivumelwano esiphela ngo-2030 ngakho-ke sinesikhathi sonke sokubhunga, okuyothi uma sesiphumile nesinqumo bese simemezela njengokujwayelekile.
Mayelana nokumenyezelwa kokuqala kweSuper Rugby ngenyanga ezayo eNew Zealand lapho amaqembu akhona ezodlala khona wodwa iSanzaar ithe lesi simo esidalwe iCovid -19 kodwa inhloso ukuthi amaqembu asezweni elilodwa abe edlala njengoba imingcele isavaliwe.